14 / 05 / 2021 14 / 05 / 2021 ရော့ Paton 671 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 Friends Apartments, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 18 +, 21319 Friends ဗဟို Perk, လူကြီးများကိုကြိုဆိုပါတယ်, Creator Expert, Lego, Lego Friends
Lego Creator Expert 10292 Friends Apartments တီဗီရှိုးတွင်ပျော်စရာရည်ညွှန်းချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် - ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအချို့ဖြစ်သည်။
£ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 မှာနှင့်လာမယ့်မှာလာမယ့် Lego မေလ ၁၉ ရက်မှဇွန်လ ၁ ရက်အထိအထွေထွေလွတ်မြောက်ခြင်း၊ 10292 Friends Apartments ဒုတိယဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Lego ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိလူကြိုက်များသောတီဗီရှိုးကို အခြေခံ၍ တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Ideas အစုံ, 21319 ဗဟို Perk.
အများကြီးရှိပါတယ်တူသော, 10292 Friends Apartments လုပ်သော storylines နှင့်ပြက်လုံးများနှင့်ပြည့်ဝ၏ Friends ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေသည့်အထင်ကရနှင့်ကြာရှည်ခံသည့်အောင်မြင်မှု။ Plus အား၏နှစ်ဆအရွယ်အစားဖြစ်ခြင်း 21319 ဗဟို Perk, အကြီးစားအုတ် -based အပန်းဖြေနှစ်ခု Chandler နှင့် Joey ရဲ့ ap ကိုပြသartMonica နှင့်ရာခေလတို့၏ apartရည်ညွှန်းချက်အရေအတွက်ကိုသင်နှစ်ကြိမ်တွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သိသည်ဖြစ်စေ၊ သိမ်မွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဆောက်လုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးများဖြစ်သည် Lego Friends အစုံ
“ အိုး၊ မင်းရဲ့အစိမ်းရောင် Ottoman ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာမင်းမြင်လိုက်ရပြီ”
ဤသည်ရာခေလသည် ap ကိုဆေးကြောသောအခါရာသီ 1 ၏ဆဌမဇာတ်လမ်းတွဲသို့ပြန်သွားသည်artအစိမ်းရောင် Ottoman ကို၎င်း၏တိကျသောနေရာမှရွေ့လျားပြီးနောက် Monica ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ပြည့်ဝစုံလင်သူဖြစ်သည်။ အများကြီးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Lego တည်ဆောက်ပေမယ့်၎င်း၏ပါဝင် 10292 Friends Apartments ဖျော်ဖြေမှုသည် ပို၍ သိမ်မွေ့ပြီး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ အလွန်ဆိုးသည်မှာအနည်းဆုံးညွှန်ကြားချက်များအရ Monica သည်၎င်းကိုကောက်ယူမည့်နေရာ၊ 'ပျော်စရာအတွက်သာ' မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုရွှေ့ရန်နှင့် 'ခဏသာထားခဲ့ပါ' ဟုအကြံပြုသည်။
“ ကောင်းပြီဘဲဘဲရေကူးနိုင်တယ်။ ”
မိန်းကလေးများ၏ ap နှင့်မတူသည်artment, အယောက်ျားလေးများ '' apartment ပြပွဲတစ်လျှောက်လုံးအများအပြား set ကိုအပြောင်းအလဲများသည်။ သူတို့အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအမှတ်အသားကတော့ The Cat with The One မှာ Joey တစ်ယောက်ယောက်ကသူရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖျော်ဖြေရေးယူနစ်ထဲကိုသူကိုယ်တိုင်သော့ခတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ပရိဘောဂတွေအားလုံးကိုခိုးယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
နောက်ဆုံး Chandler အိမ်ပြန်လာပြီး Joey ကိုယူနစ်ကနေကယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ AP မှာကျန်နေမှာပါartment ။ နောက်ဆုံးတွင် Chandler သည်အခြားအခန်းဖော်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုစီစဉ်ပေးသည်။ Chandler သည်ယူနစ်မှကင်းလွတ်လိုသောသူတို့၏နူးလှေကိုတူညီသောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှာဖွေနေကြသည့်အခန်းဖော်များနှင့်ပြုလုပ်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲအဆုံး၌ဂျိုဝီနှင့်ချန်ဒရယ်တို့သည်ကနူးလှေခါးထစ်တွင်ကျန်နေသေးသည့်ပရိဘောဂအပိုင်းအစများထဲမှထိုင်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ထိုင်နေကြသည်။
Gladys သည်ကြောက်စရာကောင်းသောသုံးဖက်မြင်ဖြစ်သည် artသူမ၏ရည်းစား Mike နေရာပြောင်းရွှေ့သည့်အခါဖိဗေအရှုံးမပေးရန်ရှိသည်သောအလုပ် သူမသည် Monica ကိုလက်ဆောင်ပေးသည်။ ရာခေလသည်သူမ၏“ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြင့်မားခြင်း” ရှိတစ်နေရာရာကိုရှာရန်အတွက်လှောင်ပြောင်ခဲ့သည်artမော်နီကာသည်သူမသူငယ်ချင်းထံသို့နှစ်ကြိမ်မကြိုးစားမီ Joey နှင့်အတူနေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Monica သည်၎င်းကို Joey အား“ မူလ Buffay” အဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ Joey ကရာခေလအားသူက“ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဈေးနှုန်း” ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်ကိုဝမ်းမြောက်စွာပြောကြားခဲ့သည်။ ဖိဗေသည်ထပ်တူထပ်မျှကြောက်စရာကောင်းကြောင်းဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြသသောကြောင့်ရာခေလသည်သူမ၏အိမ်သူအိမ်သားများအား၎င်းမှာသရဲခြောက်သည်ဟုယုံကြည်နေသော်လည်းမော်နီကာသို့မပြန်နိုင်ပါ artသူမဖန်တီးတဲ့အလုပ်ကသူတို့တစ်ခုစီကိုရနိုင်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ Lego Gladys ၏ဗားရှင်းသည်နည်းတူသရဲခြောက်လိမ့်မည်။ ကြည့်ရတာ
သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းနီးပါးအကြား foosball စားပွဲပေါ်မှာစကားစမြည်ဝိုင်းများစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Joey နှင့် Chandler တို့၏ပုံဆောင်ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည် friendsတင်ပါး ဒါကနောက်ဆုံးတစ်ခု (P) တွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်art ၂) ဂျိုနီသည်ကြက်တစ်ကောင်ဝယ်ပြီး Monica နှင့် Chandler တို့အတွက်အိမ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်လက်ဆောင်အဖြစ်ယောက်ျားလေးများ၏ကိုယ်ပိုင် feathery အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်နောက်ဆုတ်သွားသောအခါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, Joey ပြန် AP မှလာသည်artသာငှက်ကလေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်စားပွဲမှာပိတ်မိနေပြီဆိုတာကိုသိဖို့ပဲ။ Joey နှင့် Chandler တို့သည်ငှက်များကိုကယ်တင်ရန်စားပွဲကိုဖျက်ဆီးရန်ကြောက်မက်ဖွယ်အလားအလာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမော်နီကာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၎င်းကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်သည်အထိဖြစ်သည်။
မော်နီကာသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းခံရနိုင်သည် - သို့သော်သူမမှောင်မိုက်သောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိသည်။ လျှို့ဝှက် Closet နှင့်အတူ The One အတွက် Chandler မှရှာဖွေတွေ့ရှိ, က ap ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပါပဲartတစ်ခုရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ် ment ။ သင်လည်း၎င်းကိုလျှို့ဝှက်ထားနိုင်ပြီးလှည့်နေသောပန်းကန်တံခါး၏နောက်ကွယ်တွင်မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော် Chandler သည်အသေးအမွှားရုပ်ပုံများကိုမည်သည့်အချိန်တွင် ဖြတ်၍ ခိုးယူသွားနိုင်ကြောင်းကိုသင်မသိပါ။
ငါ့ကိုကြည့်၊ ငါ Chandler ပါ be နောက်အဝတ်ထပ်ဝတ်နေသလား။
ပြပွဲ၏တင်းကျပ်စွာရေးသားထားသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်သော The No One's Ready ဖြစ်သည့် One မှထင်ရှားသောအခိုက်အတန့်ကတော့ Chandler သည်ရေချိုးခန်းထဲမှာသူထိုင်နေစဉ်အမှတ်ရစရာနိဂုံးချုပ်မှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအငြင်းပွားမှုကိုပိုဆိုးစေခဲ့သည်။ Chandler သည်ဂျိုနီ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားများအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြင့်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းခံရသည် (သူသည်ပြတိုက်ရှိအနက်ရောင်လည်စည်းပွဲအတွက်အုပ်စုကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ရော့စ်သည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်)၊ ယုတ္တိနည်းအရသူ့သူငယ်ချင်း၏အဝတ်အစားများအားလုံး ၀ တ်ထားသည်။
Monica သည်ပြပွဲရှိအက္ခရာများအားလုံး၏စုစည်းမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သဘာဝသူမ၏ ap ၌တည်၏artစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောစာရင်းများရှိရမည်။ အများစုမှာဂရုစိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီ partသူမ Ross's မင်္ဂလာဆောင်တွင်အင်္ဂလန်သို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်ရာတွင်သူမရေးခဲ့သောစာမှာစာရင်းဖြစ်သည်art 1) သူမရာထူးအမျိုးမျိုးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် 'စစ်ဆေး' ရာ၊
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့မော်နီကာမှာသူမဘဝရဲ့ကဏ္ every အားလုံးနီးပါးအတွက်စာရင်းရှိတယ်လို့တွေးမိတယ်၊ ၎င်းသည် Monica ၏အလွန်စနစ်ကျသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြသသောဒီဇိုင်နာများမှကောင်းစွာပါဝင်သည်။
The Joey အထူး
"ကျနော်တို့ကဂျိုအထူးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ " ပီဇာ ၂ ခု?!
ပြပွဲမှတဆင့်ပြေးတုန်လှုပ်ချောက်ချားဂျိုရဲ့အစားအစာဆီသို့ဆှဖှေဲ့ဖြစ်ပြီး, p အတွက်articular, သူသည် '' သည်သူ၏အဖြစ်ပီဇာနေရာကိုရည်ညွှန်းသောထိုကဲ့သို့သောအဆင့်အထိတီထွင်ခဲ့ကြသည့်ပီဇာအပေါ်သူ၏ခံစားချက်များကို friends'' သူကသူ့နောက်မှာအမည်ရှိ '' ဂျိုအထူး "ရှိပါတယ်။ Joey အထူးကဘာလဲ။ ပီဇာနှစ်မျိုး။ ဒါဟာ 10292 အတွင်းသိမ်မွေ့ညိတ် Friends Apartဒါပေမယ့်ငါတို့ pizza သေတ္တာနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီး Joey လည်းတွေ့လိမ့်မယ်။
ပြပွဲအတွင်းမှာရာခေလနဲ့ချန်းဒယ်တို့ပတ်ပတ်လည်မှာပြတ်ပြတ်သားသားကြံစည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရခဲပေမယ့်သူတို့အတူတကွစုစည်းတဲ့အခါမှာပျော်စရာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါ။ ရာခေလသည်မတော်တဆတိုက်မိခြင်းကြောင့်သူတို့၏အဆောက်အ ဦး ၏အခြားနေထိုင်သူတစ် ဦး မှအရသာရှိသောဒိန်ခဲတစ်ခွက်ခိုးသည်။ သူမနှင့် Chandler နှစ် ဦး စလုံးသည်အားရစရာအတွက်အရသာရသောအခါ၎င်းသည်စက္ကူကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဒိန်ခဲကိုကျသွားစေသည့်နှစ်ခုကြားစစ်ပွဲတစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။
အကောင်းဆုံးကိုမရရန်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့တက်နိုင်ပြီးဂျိုဝီ၏ကြားဖြတ်မှုကိုခံရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂျိုဝီဟာကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ဘူး။ ဒိန်ခဲရဲ့ငရဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
"ကောင်းပြီ Lions နည်းပညာပိုင်းအနိုင်ရပေမယ့် Green Bay … Mermen အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအောင်ပွဲတစ်ခုပါ။ "
အားကစားဂိမ်းသည်သူငယ်ချင်းအုပ်စုအတွက်ဖျော်ဖြေရေးအဓိကဖြစ်သည်။ Phoebe နှင့် Chandler တို့သည် The One တွင်ကောလာဟလပါသော Thanksgiving ညစာနှင့်အတူကူညီခြင်းမှထွက်ခွာရန်အရေးကြီးသည့်ဂိမ်းကိုကြည့်ရှုနေဟန်တူသည်ဖြစ်စေ၊ friends နောက်ခံတွင်အမေရိကန်ဘောလုံးပွဲနှင့်အတူဂျို၏နောက်ထပ်သရုပ်ဆောင်အလုပ်အကြောင်း chatting ။ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြင့်ကစားခြင်းသည် room ည့်ခန်းအတွင်းရှိပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသင်အားလန်းစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်မည်သည့်မြင်ကွင်းနှင့်မဆိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။
သူအသက်ရှင်ပြီ! "ဒါပေမယ့်ငါတို့နေသေးတယ်ငါတို့နေဆဲ ... "
အရုပ်ဆိုးသောအဝတ်အချည်းစည်း Guy သည်နည်းတူအများကြီးပဲart သူကငါတို့အနည်းဆုံးမြင်တ ဦး တည်းရင်တောင်အခြားအခြမ်းဇာတ်ကောင်မဆိုအဖြစ်ပြပွဲ၏။ သူသည်မိန်းကလေးများနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်နေထိုင်သည်။ ဂိုဏ်း၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးကိုလုပ်နေသည်။ သူသည်သူမ၏အမြဲလိုလိုအဝတ်အချည်းစည်းနှင့်အထီးကျန်ဆန်မှုကြောင့်ရယ်စရာဖြစ်လာသည်။ The Giant Poking Device ပါ ၀ င်သည့် The One တွင်ဖီဘီသည်သူမအကြိုက်ဆုံးကင်မရာမင်အီးကိုသေစေနိုင်ကြောင်းအလွန်ကြောက်သည်xtra သွားဆရာဝန်ထံသို့သွားခြင်း (မမေးပါနှင့်) ။
Ugly Naked Guy အသက်ရှင်ရန်သေချာစေရန်ဖိဗေ၊ မော်နီကာ၊ ရာခေလ၊ ရော့စ်နှင့်ဂျိုဝီတို့သည်stရာမဥယျာဉ်မှူးကြီးများနှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းတစ်လျှောက်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ တုတ်ထိုးခံရပြီးနောက်သူနိုးလာပြီးကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ရှင်သန်နေသည်။ သူကသူမလုပ်နေသည်ကိုနားလည်ရခက်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Ugly Naked Guy သည်သူ၏ app ကိုရောင်းမည်art, ဝေးရွေ့လျားခြင်းနှင့်နောက်တဖန်၏ကြားရခံရဖို့, Ross မှ ment ။
နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, BarcaLoungers ။ အဆိုပါယောက်ျားလေးများ 's apartJoey နှင့် Chandler ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုလားထိုင်များမရှိလျှင်အလုပ်ကိုတစ်နေ့တာမှအိမ်သို့ကြိုဆိုရန်အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
← Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် LEGO ရဲတိုက်ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုကို ဦး စွာကြည့်ပါ →